Amaphethini okudlula atholakalayo epayipi elinezimbobo zensimbi engagqwali ahlanganisa ukuvuleka okuyindilinga, kwesikwele, okuyi-hexagonal, okuyi-elliptical kanye nokukhethekile.
Amashubhu ensimbi engenasici asetshenziswa kakhulu ahlanganisa 304, 304L, 316, 316L. Insimbi ye-carbon nayo ingasetshenziswa.
Ishubhu lensimbi engagqwali elinezimbobo lenziwe ngepuleti lensimbi engenasici i-T304 noma ipuleti lensimbi engagqwali elingu-t316. Lawa ma-tube plate anochungechunge lwezimbobo, ezingakhelwa wena. Amaphethini angahluka kuye ngobukhulu bezimbobo, ibanga phakathi kwezimbobo, kanye nobukhulu bento.
Ngokungafani ne-carbon steel, insimbi engagqwali inokumelana nokugqwala. Iqukethe i-chromium, eyenza ifilimu evikelayo engabonakali lapho ibhekene nomoya-mpilo. Ngokusho kwekhono eliqinile lensimbi engagqwali, lingahlukaniswa ngezigaba ezintathu. Izinsimbi ezingenasici ze-Austenitic ezingaqiniswa umsebenzi obandayo zihlangabezana nezindinganiso eziningi zokuklama. Ngokuyisisekelo awanawo uzibuthe, nakuba angase abe kazibuthe kancane ngenxa yokusebenza okubandayo.
Amashubhu anezimbobo zensimbi engagqwali awuhlobo lwe-chromium eqondile futhi angenziwa lukhuni ngokuphathwa ukushisa.
Enye yezinsimbi ezingenasici ezisetshenziswa kabanzi. Inamandla amahle kakhulu, ukumelana nokugqwala kanye nenqubo yokukhiqiza. Ukuze kwehliswe imvula yama-carbides ngesikhathi sokushisela, i-304L isetshenziswa uma okuqukethwe kwekhabhoni kuphansi.
Uma iqhathaniswa namanye ama-alloys ochungechunge angama-300, inokumelana nokugqwala okuhle kakhulu lapho isetshenziswa ezindaweni ezigqwalile (njengamanzi olwandle, amakhemikhali, njll.). Ukuze kuncishiswe imvula yama-carbides ngesikhathi sokushisela, i-316L isetshenziswa njengokuqukethwe kwayo kwekhabhoni ephansi.
1.) impendulo esheshayo:
Kuhlala kubiza kakhulu esikhathini esizayo. Ukusebenza kahle okuphezulu kokuxhumana, thola impendulo yethu esheshayo. Umbuzo wakho uzophendulwa engakapheli amahora angu-8;
2.) ithimba lethu lobuchwepheshe lingakusiza ukuthi uhumushe imibono yakho ibe yisakhiwo esibonakalayo, futhi kumahhala; umklamo wamahhala we-CDA;
3.) isampula: hlinzeka ngenani elikhulu lamasampula okuqinisekisa kwakho ngaphambi kokukhiqizwa ngobuningi;
4.) ukuhlolwa: ukulawula okuqinile kwekhwalithi kuqinisekisa ukuthi imikhiqizo egculisayo ingalethwa kuwe;
Amalungiselelo ezokuthutha: ukuthenga izinto ezahlukene? Ithumele kithi ndawonye ukuze wonge okwengeziwe.
Okwedlule: Ukuhlukaniswa komgwaqo okuphakathi komgwaqo kamasipala wokuqapha umgwaqo
Olandelayo: Iphakethe lesikrini sokuhlunga izingqimba eziningi zensimbi engagqwali yokunyathela isitembu
I-Stainless Steel 316 yekhwalithi ephezulu ye-barbecue wire ...
Insimbi engagqwali ye-barbecue mesh impahla yensimbi engenasici, i-carbon galvanized wire ephansi. Ukwaluka nezici: ezilukiwe futhi ezishiselwe; Ukumelana nezinga lokushisa eliphezulu, akukho deformation, akukho ukugqwala, non-toxic futhi abanambitheki, kulula ukuyisebenzisa; Insimbi engagqwali ye-barbecue yemeshi ihlukaniswe yaba yindilinga, isikwele, i-arc, njll. Insimbi engagqwali ye-barbecue mesh inqubo enethala elilukiweyo eliyisicaba, elinenetha eline-knurled, i-argon arc welding, ukushisela amabala, ukupholishwa nge-electrolytic Izinhlobo zemeshi yokosa: izoso eqoshiwe eyisikwele kimi...